Qoorqoor oo Maanta safar Deg-deg ugu ambabaxaya Magaalada Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Qoorqoor oo Maanta safar Deg-deg ugu ambabaxaya Magaalada Dhuusamareeb * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 5th April 2021
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa Maanta waxaa ku wajahan Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa Magaalada Muqdisho,
Madaxweyne Qoorqoor ayaa muddo 45 cisho u jooga Muqdisho dadaalka loogu jiro xal ka gaarista khilaafka doorashada Soomaaliya iyo ka qeyb galka Shirar looga hadlayo sidii xal buuxa Madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ay u gaari lahaayeen.
Dastuurka u yaalla dowlad Goboleedka Galmudug ayaa dhigaya in Madaxweynaha maamulka uusan degaanka ka maqnaan kari 45 cisho, waxaana Qoorqoor iyo wafdi uu hoggaaminayo ay tegi doonaan Dhuusamareeb.
Soo dhaweynta Madaxweyne Qoorqoor ayaa haata ka socota Caasimadda Maamulka, waxaana inta uu ku sugan yahay halkaas uu kulan la qaadan doonaa Madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo Golaha Wasiirada.
Shirka hordhaca ee u dhaxeeya dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa maalintii labaad ku soo dhamaaday, iyadoo aan wax natiijo ama horumar la gaarin, waxaana la isku soo laaban doonaa maalinta Talaadada ah.